Amabhokisi eposi kanye namabhokisi eposi - uPisoni Genova
Amabhokisi wamakheli kanye namabhokisi eposi - i-Pisoni Genova
Izingcweti zokuphepha kweposi
cassette e amabhokisi eposi in plexiglass o onamagciwane: okuqinile I-Pisoni, a IGenoa kwakha amamodeli enziwe ngezifiso ngobungcweti obukhulu. Nazo ziyenziwa Imidwebo su amapuleti nezinhlobonhlobo zezinto, ezivela ubucwebe bemvunulo konke izinsimbi zezikebhe.
Amabhokisi eposi kanye namabhokisi eposi eGenoa: i-imeyili yakho ibonga iphephile kuPisoni
Le amabhokisi eposi futhi ejwayelekile amarekhodi Amakhondomu ziyizinto eziyingxenye yesipiliyoni sethu sansuku zonke. Baqapha ezethu mail nokwethenjwa nokuqonda. Ekujaheni inqubo yansuku zonke, i- ikhasethi iposi bayinkomba yeyethu mail zilele zigadwe lapho. Ukubenza a Genoa, kanye ne amarekhodi, bangabachwepheshe abaqopha izingcweti okubeka ikhono elikhulu ekutholakaleni kwezinsizakalo amabhokisi kanye nokugcwalisa amakhabethe ezikhiqiza. Lokhu, Inkampani yasePisoni ingenye edume kakhulu kulo mkhakha sibonga ukunakwa okusetshenzisiwe ekusetshenzisweni kwe izinto zokwakha futhi ekukhetheni kwe amafomethi. I amabhokisi eposi zingakhiwa ngaphakathi, zakhiwe ngaphakathi noma zifakwe ngaphakathi gciwane, nokuqedwa kombala wangaphakathi i-walnut eyenziwe ngamapulangwe.
Amabhokisi e-imeyili eGenoa: kanye namabhokisi eposi, into eviniweyo eyenziwe ngabenzi beqiniso bokuqopha
IsiPisoni uyaqaphela ikhasethi e amabhokisi eposi in i-anodized aluminium futhi hhayi kuphela. Ngaphezu kwalokho, zingadalwa ngamafomethi ahlukile, kufaka phakathi uhlobo olusebenzayo umagazini-rack. Siphinde sinikeze amamodeli ahlukahlukene we amarekhodi e amabhokisi eposi ngingene ngomnyango plexiglass trasparente, obhemayo futhi onsundu, noma ngesitayela sakudala. Njalo ibhokisi ifakwe ukhiye umnyango ukuphepha ephelezelwa ngababili bezikhiye e ipuleti eqondene nomuntu. the izincwadi ingeniswa kusuka ohlangothini olungaphezulu noma ngaphambili. Ungaxhumana nathi futhi Imidwebo kunoma yiluphi uhlobo lwento phakathi plexiglass o insimbi.
Imidwebo yokwenza ngezifiso izinto zobucwebecwebe, izikhumbuzo eziyisikhumbuzo noma izesekeli ezisezingeni eliphakeme
Ngaphezu kokuqashelwa kwe amarekhodi e amabhokisi eposi, IsiPisoni uphawu lomhlaba a Genoa emkhakheni we Imidwebo okhethekile. Senza umsebenzi ngazo zonke izinhlobo zezinto zokwakha: plexiglass, igolide e esiliva ukwenza izindandatho ngezifiso, namasongo, imigexo, amawashi, stethoscopes, izikhonkwane, izinkomishi kanye trophies. Nazo ziyagcwaliseka Imidwebo Nautical okuyinto amamaki ngayinye Bitte e izinsimbi zezikebhe. IsiPisoni ilinde wena ukukukhombisa okunezinhlobonhlobo ezinkulu ikhasethi e amarekhodi futhi uhlangabezane nezidingo zakho.
Ikheli: UPiazza Giovanni Antonio Aprosio, 34 Red
Ucingo: 010 6048147
Umakhala ekhukhwini: 342 0354564
Inombolo ye-VAT: 02175960992